Ireo blaogera indiana mikasika ny Virginia Tech: alahelo, ary fanontaniana iray tapitrisa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2018 2:32 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aprily 2007)
Nahatohina izao tontolo izao ny loza nitranga tao amin'ny oniversite Virginia Tech. Manoratra ny Saja Forum : ” Hanamarika ary hanamaloka mandrakizay ny Virginia Tech ity Alatsinainy feno rà ity, ary amin'izao fotoana izao indrindra, raha koa ka mandroso ny tantaran'ity fandringanana mahatsiravina izay nahafatesana olona telo amby telopolo ity, tsy mahatsapa zavatra hafa ankoatra ny fahangoly vokatry ny dona voalohany aterak'ity loza « goavana » ity isika, miaraka amin'ny feon'ny honohonon'ny fahitalavitra ».
Zavatra roa no mandona rehefa mitsidika ny tontolon'ny blaogintsika [indiana].Ny alahelo lehibe ho an'ireo olona telo amby telopolo novonoina (izay indiana ny roa, Minal Panchal sy GV Loganathan), ary ny toetran'ilay nahavanona ireny heloka bevava ireny.
Tsy afa-po tamin'ny fandrakofana ny zava-mitranga izay natolotry ny haino aman-jery i Duck To Water [En], ary mieritreritra ny fanaintainan'ny Ray aman-drenin'ireo niharam-boina.
” Olona roa, Indiana mpampianatra sy mpianatra no latsaka aina tao anatin'ity tranga ity (Omaly, tsy nisy teratany Indiana teo amin'ireo niharam-boina araka ny gazety indiana iray, noho izany, fanitsiana ity). Tena mbola marary bebe kokoa izany ho an'ny Ray aman-drenin'ireo mpianatra vahiny tao amin'ilay oniversite. Voalohany aloha, mahazo vatsim-pianarana avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra ireo, noho izany, mety sahirana ara-bola ny Ray aman-dreniny. Ankoatra izany, misy ny olana amin'ny resaka vizà. Na dia misy vizà ho an'ny tranga vonjimaika aza, eritrereto ny zavatra tsapa rehefa mankany amin'ny biraon'ny kaonsily ianao mba hanamarinana ny vizà-nao nefa ny zanakao maty any amin'ny ilan'ny tany ! ».
Asongadin'i Mitesh fa nangalatra ny mombamomba an'i Minal Panchal tao amin'ny tambajotra sosialy Orkut ny mpanao gazety sasany, ary nanontany olona sasany tamin'ny aterineto mba hamaly ny resadresaka nataony. Maneho ny fahoriany i Scout.
”Navoaka ho fanta-bahoaka ny mombamomba sy ny pejy manokana tao amin'ny Myspace sy Facebook an'ireo olona maro lasibatra ary tsy nahavita nijanona nitomany aho rehefa namaky ireo hafatry ny namany izay nangataka azy ireo hiantso sy hanome vaovao. Mba ahoana àry no ahafahan'izao tontolo izao mizaka izany zavatra rehetra izany? Nahoana no toa mora be toy izany ny fividianana fitaovam-piadiana ? Ary ho fanombohana, nahoana no tokony ho mora izany ? Tsy tokony handray lesona tamin'ny zavatra nitranga nandritra izay folo taona lasa izay ve ny olona?
Ity misy lahatsoratra fohy nosoratan'i Arzan [En], izay tao amin'ny oniversite [tany India] nisy an'i Minal, tao amin'ny kilasy ambony kokoa noho izy. Manoratra lahatsoratra mampihetsi-po i Vrushali Lad [En], izay tao amin'izany kilasy izany ihany.
”Ho ao anatin'ny eritreritro mandrakariva i Minal manomboka izao…Izy, ilay vehivavy mankafy an'i Franck Lloyd Wright sy ny [boky] Ny Loharanom-piainana (La source de vie)….Izy, ilay nanana fomba fijery tsy mitanila, na tamin'iza na tamin'iza…Izy, ilay tia zavatra hafahafa. Tsy haiko hoe iza no tena alahelovako indrindra : ny reniny, izay mitomany ny zanany any amin'ny firenena vahiny, sa ireo namany am-polony izay nandefa hafatra marobe taminy mba hahafantarana ny toerana nisy azy sy hoe salama tsara ve izy. Tsy mamaly ny findainy, mbola ao anatin'ny lisitr'ireo olona tsy hita foana izy, saingy mahafantatra ny rehetra fa efa lasa izy.”
Mamoaka lahatsoratra mahaliana tamin'ny alalan'ny zavatra hitantsika i Amardeep Singh [En] : fa hoe nampitandrina ilay oniversite tamin'ny votoatin'ny famelabelaran-keviny tamin'ny « literatioram-pamoronana » ny mpampianatra iray an'ilay mpamono. Manolo-kevitry izy fa tokony averina dinihana ny toerana ankehitriny misy ilay Oniversite izay ny «Tsy Misy fitsabatsabahana ». Mamoaka filazana manjo fohy momba ny profesora GV Loganathan i Sepia Mutiny [En], ary manasongadina fanehoankevitra tsara avy tamin'ny iray tamin'ireo mpianany: ”Andriamanitry ny taranja nampianariny izy”. Milalao ny eritreritra sy fomba fijerin'ny fironana ara-politika isan-kazarany tamin'ny fanambarana ilay loza tamin'ny fomba maizina sy maneso tao anatin'ny lahatsoratra iray mahagaga i The Renegade of Junk [En]. Ahitana fanavaozana valo mikasika ilay famonoana ny lahatsoratr'i Sepia Mutiny’ [En] ary nanehoana hevitra mihoatra ny in-250.
Mametraka fanontaniana tena mitombina be i Stylestation [En] ankehitriny – nahoana no toa mora be toa izany ny fahazoana fitaovam-piadiana?
”Azon'i Cho Seung-Hui tsara ve fa ain'olona tena izy no nalàny? Fa namono olona tena niaina? Tonga niaraka tamin'ny basy feno bala maro izy. Nahoana ary tamin'ny fomba ahoana no nahafahan'ny tanora 23 taona hanana izany? Tsy afa-manoatra ary misafotofoto aho – mila mahafantatra fotsiny ny fomba mahatonga izany ho azo tanterahana aho..
Tsy misy teny, kanefa ny teny irery ihany no vahaolana. Mankany amin'ny fiankaviana sy naman'ireo maty ary koa mankany amin'ny fianakavian'i Cho Seung-Hui ny vavaka ataoko, izay, antenaiko fa hahazo famelankeloka arahana fiantrana noho ny tsy nahalalany ny zavatra hitranga’